Nahazo tale vaovao ny orinasa Fanalamanga - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nahazo tale vaovao ny Fanalamanga. Andriamatoa Rakotonirina Augustin no voatendry hisahana io andraikitra io. Ny 5 marsa teo no nampahafantarina ny maro izany fanendrena izany. Nisy ny fitsofan-drano ity tale vaovao ity. Tangalamena efatra no nisolotena ireo namany hafa ary nanatanteraka izany adidy lehibe izany. Fomba fanao tokoa ny mitsodrano ny olona iray hisahana andraikitra goavana. Mainka moa fa zanak’i Moramanga ihany koa ity vao notendrena ity.
Nandritra ny fandraisam-pitenana nataon’ity tale vaovao ity no nilazany fa mila ny manam-pahaizana rehetra ny tenany hifanome tanana hanarina ny orinasa Fanalamanga. Nilaza ny tenany fa tsy iamboho adidy raha nanaiky hisahana ny andraikitra. Fa tsara kokoa raha miara-misalahy ny rehetra amin’ny asa fanarenana. Efa nanarina orinasa nandalo fahasahiranana ny tenany raha ny filazany.
Tena foto-piveloman’ny ankamaroan’ny mponina eto Moramanga raha ny resaka hazo. Fa ny fikirakirana ny hazo no ahafantarana ny Fanalamanga. Koa raha marary ny orinasa Fanalamanga dia ny mponina rehetra no marary. Fantatra anefa fa tao anatin’ny taona maro dia tsy nisy re afa-tsy ny aretina mikiky ny orinasa teny anivon’ny haino aman-jery indrindra tao anatin’ny fitondrana Tetezamita.
Nisy fotoana nitaraina ireo mpitrandraka ny ala ao Moramanga. Nilaza izy ireo fa be loatra ny fitrandrahana ny ala. Tsy mifanaraka ny fanavaozana ny ala sy ny fitrandrahana ka manahy ireo mpitrandraka fa ho ringana tsy ho ela ny ala. Tsy hisy intsony izany ny foto-pivelomana ho an’ny fianakaviana maro. Tsiahivina fa mahatratra hatrany amin’ny 60 000 ha ny velaran-tany eo ambany fiahian’ny Fanalamanga. Eo amin’ny 200 eo ho eo ireo mpitrandraka ny ala ao Moramanga. Kanefa dia nisy fotoana re teo amin’ny haino aman-jery fa mpitrandraka am-polona no tena lasa mizahozao sy mitrandraka ny ala mihoapampana ka tsy mitsinjo ny ho avy. Izany hoe nifanaraka tamin’ny Fanalamanga ireo mpitrandraka ireo fa velaran-tany 16 000 ha no ho trandrahan’izy ireo ka 1 000 ha isan-taona no tena iasana izany hoe ny velaran-tany sisa kolokoloina. Toa tsy voahaja izany fifanarahana izany. Aiza ho aiza izany izao ? Manana adidy hijery sy hilaza momba izany mazava ity tale jeneraly ity. Voalaza fa nitrandraka mihoatra lavitra noho ny vitan’ny mpitrandraka 200 isa ireo mpitrandraka am-polony ireo.
Amin’izao fotoana handrenesana vaovao momba ny fambolen-kazo izao dia ilaina mazava ny zava-misy ao amin’ny ala eo ambany fahefan’ny Fanalamanga. Tena misy ve izany fambolen-kazo izany ? Misy ve ny fanarahamaso aorian’ny fambolen-kazo sa lasa fitsangatsanganana fotsiny ? Manao ahoana ny fiarovana ny ala amin’ny doro ala ? Vao mandray andraikitra ity tale jeneraly vaovao ity kanefa dia iriana raha manazava tsara ny zava-misy sy ny tanjona apetrany izy. Ny lafy ratsiny hatrany hatreto no re momba ny ao amin’ny orinasa Fanalamanga. Ho manga ve ny ampitson’ity orinasa ity sy ireo mpitrandraka ny ala ?